XOGTII Ugu dambeysay Weerarka ka socda wadada Maka Al-Mukarama. – Xeernews24
XOGTII Ugu dambeysay Weerarka ka socda wadada Maka Al-Mukarama.
1. März 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Weerarkii xalay ay soo qaadeen Al-Shabaab ayaa muddo ka badan 12 saacadood ka badan weli ka socda dhismeyaal ku yaalla wadada Maka Mukarama.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ragga hubeysan ee ka tirsan Al-shabaab ay galeen guri ay degan yihiin dad shacab ah oo u dhow hotelka Maka Al-Mukarama iyo maqaayada Hilaac UK.
Gurigan oo ah mid aad u weyn oo dad badan ay degan yihiin ayaa waxaa ku nool qoys caan ah oo la yidhaahdo reer Shideeye, iyadoo ciidamada dowlada ay soo badbaadiyeen dadka ku noolaa gurigaas oo ka badnaa 40 qof sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah dadka laga soo saaray dhismahaas.
Afar qof oo ka mid ahaa dadkiii degenaa gurigaas ayaa la sheegay in loo qaaday isbitaalada ka dib markii ay ku dhaawacmeen weerarka ku qabsaday gurigooda.
Goob joogayaal ayaa sheegaya in dableyda ka tirsan Al-shabaab ay bambooyin iyo rasaas ka dhex tuurayaan gurigaas ay galeen, iyadoo ciidamada amaankuna ay isku dayayaan iney weerarka soo afjaraan, rasaas goos goos ah ayaan weli goobta ka dhaceysa, iyadoo Wararka qaar ay sheegayaan in dableyda al-shabaab ay qaldeen bartilmaameedkii ay rabeen,
Dhinaca kale, dad fara badan oo nolol iyo geeri ku raadinaya dad eheladooda ah oo maqan ayaa buux-dhaafiyey agagaarka goobta weerarku uu ka socdo, ka dib markii ay u suurageli weyday iney burburka dhismeyaasha iyo gaadiidka goobta daadsan ka dhex raadiyaan eheladooda.
ciidamada amaanka ayaa dadkaasi hortaagan una diidan iney goobtan galaan, iyagoo u sheegaya inuu socdo howlgal, goobtana aysan weli amaan aheyn.
Jawiga wadada Maka Al-Mukarama ayaa weli cakiran kana duwan sidii hore, waxaana jira dhaawacyo cusub iyo meydad saaka la gaadhsiiyey goobaha Caafimaadka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/03/maka.jpg 392 696 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-03-01 08:36:122019-03-01 08:36:12XOGTII Ugu dambeysay Weerarka ka socda wadada Maka Al-Mukarama.
Duqayda Gandaha beesha Ciise oo wali ka quusan la, maamulka Jigjga Tigreega oo 60-kun oo ciidana Geeyay xadka Axmarada iyo Halis dagaal.